HUAWEI Y7p, 6.39” HUAWEI Punch Display | HUAWEI Myanmar
ခန့်မှန်းလို့မရတဲ့ အလင်းရောင်ပုံစံကို အခြေခံရေးဆွဲထားပြီး Nano-Texture နည်းပညာနဲ့ ပေါင်းစပ်ထားတာကြောင့် HUAWEI Y7p က အလင်းရောင်ပြန်စေမယ့် ကျောဖက်ရယ်၊ 2.5D ပုံစံရယ်တို့ရယ်က ထူးခြားမှုတွေကို ဖန်တီးပေးပါတယ်။ အရောင်အသွေးစုံလင်တဲ့ တံခါးတစ်ချပ်ကို ဖွင့်လှစ်လိုက်သလိုပါပဲ။
6.39 လက်မ4 ရှိတဲ့ Punch FullView မျက်နှာပြင်ကိုသုံးပေးထားတာကြောင့် HUAWEI Y7p က 90.15%B မျက်နှာပြင်-ကိုယ်ထည်အချိုး5 နဲ့အတူ ပိုပြီးကျယ်ပြန့်တဲ့မျက်နှာပြင်ကို ပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။ Huawei ရဲ့ ဆန်းသစ်တီထွင်မှုဖြစ်တဲ့ မျက်နှာပြင်အပေါက်တစ်ခုတည်းပါ နည်းပညာက ရှေ့ကင်မရာကို မျက်နှာပြင်အတွင်း ဖုံးအုပ်ပေးထားပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် အနှောင့်အယှက်ကင်းကင်းနဲ့ အကောင်းမွန်ဆုံးအတွေ့အကြုံသစ်တွေကို ခံစားရစေမှာပါ။
အခုဆိုရင် တောက်ပပြီးကြည်လင်တဲ့ ညဖက်ဓာတ်ပုံတွေကို Tripod မလိုဘဲ ရိုက်ကူးနိုင်ပါပြီ။ AI Stabilization နည်းပညာရယ်၊ ခြောက်စက္ကန့်6 အထိထားပြီး ရိုက်လို့ရမယ့် Exposure တို့ကို ပေါင်းစပ်လိုက်တော့ HUAWEI Y7p က အလင်းရောင်နည်းပါးတဲ့အခြေအနေတွေမှာ တိကျ၊ ကြည်လင်ပြတ်သားတဲ့ ဓာတ်ပုံကောင်းတွေကို ဖမ်းယူနိုင်မှာပါ။
အသိဉာဏ်မြင့် ကျောဖက်ကင်မရာသုံးခုပါဝင်တဲ့ HUAWEI Y7p က သင့်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်စတူဒီယို တစ်ခုလိုပါပဲ။ 48 MP ပင်မကင်မရာရယ်၊ 8 MP Ultra Wide ကင်မရာရယ်၊2MP Depth ကင်မရာတို့ ကောင်းမွန်တိကျပြီး ကြည်လင်တဲ့ဓာတ်ပုံတွေကို ရရှိစေနိုင်မှာပါ။
AI ရဲ့ အသိဉာဏ်မြင့် သိမှတ်နိုင်တဲ့ နည်းပညာက မတူညီတဲ့ အရာဝတ္ထု ၂၁ မျိုးရဲ့ မတူညီတဲ့အခြေအနေပုံစံပေါင်း ၅၀၀ ကျော်ကို ကင်မရာချိန်လိုက်ရုံနဲ့ ခွဲခြားသိမြင်နိုင်ပြီး အကောင်းဆုံးဓာတ်ပုံတွေရရှိအောင် အလိုအလျောက်ချိန်ညှိပေးနိုင်ပါတယ်။7 ကဲ အားလုံးက ဓာတ်ပုံဆရာဖြစ်နိုင်ပါပြီ။
အခြေအနေအားလုံးမှာ လျင်မြန်မှုရရှိစေဖို့ Huawei ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဖန်တီးထားတဲ့ လည်ပတ်မှုစနစ်က အလိုအလျောက်ချိန်ညှိမှုများစွာကို လုပ်ဆောင်ပေးမှာဖြစ်လို့ ထစ်တာ၊ ဟန်းတာမရှိစေပဲ ချောမွေ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေ ရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဖုန်းက အမြဲတမ်းအသစ်လိုဖြစ်စေမှာပါ။
အသုံးပြုနိုင်တဲ့ Memory ပိုမိုများပြားလာအောင် တိုးတက်လာမှု
4000 mAh ဘက်ထရီပမာဏ
အားကောင်းတဲ့ 4000 mAh ဘက်ထရီအထောက်အပံ့ကြောင့် HUAWEI Y7p က ၂၂ နာရီဆက်တိုက် ဗီဒီယိုကြည့်တာတွေ၊ ၁၁၁ နာရီဆက်တိုက် သီချင်းနားထောင်တာတွေ၊ ၂၀ နာရီဆက်တိုက် Website သုံးတာမျိုးတွေအထိ ရရှိစေလို့ Power Bank တွေဘာတွေ လုံးဝမလိုတော့ပါဘူး။3
ပိုပြီးလွယ်ကူသက်သာပြီး စိတ်ချရစေဖို့ HUAWEI Y7p ရဲ့ ကျောဖက်မှာ လက်ဗွေစနစ်ပါဝင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့လက်ကလေးတင်လိုက်တာနဲ့ စပြီးသုံးလို့ရစေပါပြီ။
4 GB + 64 GB ပမာဏ
64 GB ROM ပါဝင်သလို 512 GB အထိ ထပ်မံတိုးချဲ့နိုင်စေမယ့် ကြီးမားတဲ့သိုလှောင်ပမာဏ9 က အမှတ်တရဓာတ်ပုံတွေ၊ ဗီဒီယိုတွေနဲ့ App တွေကို စိတ်ကြိုက်သိမ်းဆည်းနိုင်စေမှာပါ။ နောက်ပြီး4GB RAM ကြောင့် App တွေတစ်ပြိုင်နက် အသုံးပြုနိုင်သေးမယ့်အပြင် စိတ်ကြိုက်ဂိမ်းတစ်ခုခုကို ဖွင့်တဲ့အခါမျိုးမှာလည်း စောင့်ရတဲ့အချိန်သိပ်မရှိစေတော့ပါဘူး။
ဆန်းသစ်တဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ပိုင်း၊ လျင်မြန်မှုတွေနဲ့အတူ ထူးခြားကောင်းမွန်တဲ့ အတွေ့အကြုံတွေကို EMUI 9.1 က ပေးစွမ်းနိုင်မှာပါ။ အခုဆိုရင် EROFS သုံးထားလို့ ကျပန်းဖတ်ရှုနိုင်နှုန်းမှာ 20% ပိုမိုလျင်မြန်လာသလို10 Memory ပိုင်းမှာလည်း ဓာတ်ပုံ ၁၀၀၀ ဒါမှမဟုတ် သီချင်းအပုဒ် ၅၀၀ လောက်ထိ ပိုဆန့်လာစေမှာပါ။11
ကိုယ်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ ဓာတ်ပုံတွေကို ရှာဖွေရာမှာလည်း ပိုမိုလျင်မြန်လာစေပါတယ်။ HUAWEI Y7p က အင်တာနက်မလိုဘဲ မတူညီတဲ့ Tag ပေါင်း 280 အထိ12 အလိုအလျောက်ခွဲခြားတတ်လို့ "People" တို့ဘာတို့ စိတ်ကြိုက်ရှာဖွေလိုက်ရုံပါပဲ။
သင့်သူငယ်ချင်းဖုန်းခေါ်တဲ့အခါ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ ဗီဒီယိုလေးက13 Ringtone အဖြစ်ပြပေးနေမယ်ဆို ဘယ်လောက်မိုက်မလဲ။ ဖုန်းအဝင်ခေါ်ဆိုမှုတွေကလည်း ပိုပြီးလန်းလာစေပြီပေါ့။
1. 48 MP ကင်မရာသည် ပင်မကင်မရာကို ဆိုလိုချင်းဖြစ်သည်။ ကျောဖက် ကင်မရာသုံးခုတွင် 48 MP ပင်မကင်မရာ၊ 8 MP Ultra Wide ကင်မရာနှင့်2MP Depth ကင်မရာတို့ ပါဝင်သည်။
2. FullView မျက်နှာပြင်သည် အနားသတ်ဘောင်ကျဉ်းပြီး မျက်နှာပြင်-ကိုယ်ထည်အချိုးကြီးမားသည့် ပုံမှန်မျက်နှာပြင်ပုံစံကို ဆိုလိုသည်။
3. 4000 mAh သည် ပုံမှန်ပမာဏတစ်ခုဖြစ်သည်။ Huawei စမ်းသပ်ခန်း၏ ရလဒ်ကို အခြေခံထားသည်။ အမှန်တကယ် ဘက်ထရီသက်တမ်းသည် အသုံးပြုမှုအခြေအနေများအပေါ် မူတည်သည်။
4. မျက်နှာပြင်၏ ထောင့်စွန်းများသည် လုံးဝန်းသည့်ပုံစံရှိသည်။ ပုံမှန်စတုဂံအနေအထားဖြင့် တိုင်းတာရာတွင် ထောင့်ဖြတ်မျက်နှာပြင်၏ အတိုင်းအတာသည် 6.39 လက်မရှိသည်။ (အမှန်တကယ် ဧရိယာသည် အနည်းငယ်သေးနိုင်သည်။)
5. အချက်အလက်များကို Huawei ဓာတ်ခွဲခန်းမှ ရရှိခြင်းဖြစ်သည်။ မျက်နှာပြင်-ကိုယ်ထည်အချိုးတိုင်းတာခြင်းပုံစံ: VA / CG = 90.15% (VA: Viewing Area, CG: Cover Glass)
6. အချက်အလက်များကို Huawei ဓာတ်ခွဲခန်းမှ ရရှိခြင်းဖြစ်သည်။
7. ကျောဖက်ကင်မရာများမှသာ အရာဝတ္ထု ၂၁ မျိုး၏ မတူညီတဲ့အခြေအနေပေါင်း ၅၀၀ ကျော်ကို ခွဲခြားသိမြင်နိုင်သည်။
8. အချက်အလက်များကို Huawei ၏ ဓာတ်ခွဲခန်းမှ ရရှိခြင်းဖြစ်သည်။ စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်လာခြင်း တူညီသော Specification ပါဝင်သည့် HUAWEI ၏ အခြားစမတ်ဖုန်းများနှင့် ယှဉ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
9. 512 GB အထိတိုးချဲ့နိုင်သော Storage Card များကို သီးခြားဝယ်ယူနိုင်သည်။
10. အချက်အလက်များကို Huawei ၏ ဓာတ်ခွဲခန်းမှ ရရှိခြင်းဖြစ်သည်။ ပုံမှန်ကျပန်း ဖတ်ချိန်လျင်မြန်မှုသည် EROFS အသုံးမပြုထားသော အခြားဖုန်းများထက် ပိုမိုတိုးတက်လာခြင်းဖြစ်သည်။
11. အချက်အလက်များကို Huawei ၏ ဓာတ်ခွဲခန်းမှ ရရှိခြင်းဖြစ်သည်။ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံ၏ ပုံမှန်ပမာဏသည်2MB ဖြစ်၍ သီချင်းဖိုင်သည်4MB ဖြစ်သည်။ ပိုမိုရရှိနိုင်သောပမာဏသည် EROFS စနစ်မပါဝင်သောဖုန်းများဖြင့်နှိုင်းယှဉ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
12. အချက်အလက်များကို Huawei ၏ ဓာတ်ခွဲခန်းမှ ရရှိခြင်းဖြစ်သည်။
13. အထောက်အပံ့ပေးသော Video Format များမှာ avc，hevc，mp4，vp8，vp9，3gpp，amr，g711，raw，flac，mpeg2，webm，m4a စသည်တို့ဖြစ်သည်။